Iràna: Ampiasain’ny Fanjakàna Ho Toy Ny Fitaovana Entina Mampihatra Ny Sivana Ny Fanafihana Israelianina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2017 11:32 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Swahili, Português, 繁體中文, 简体中文, English
(Fanamarihana: lahatsortra nivoaka tamin'ny Janoary 2009)
Na dia Iraniana maro mpitoraka blaogy aza, ao anatin'izany ihany koa ny islamista [amin'ny teny anglisy], no mampitombo lahatsoratra sy hetsika toy ny fanapoahana baomba Google mba hanamelohana ny fanafihan'i Israely ny Lemak'i Gaza, manamarina kosa ny hafa fa araraotin'ny fanjakàna ny ady misy ao Gaza mba hamoretana ny media sy ny fiarahamonina olontsotra ao Iràna.
Araka izany, nohidian'ny fanjakàna iraniana tamin'ny 31 Desambra 2008 ny Kargozaran [amin'ny teny farsi], gazety reformista malaza, satria nizara fanambaràn'ny hetsika nataonà mpianatra Tahkim Vahdat [amin'ny teny anglisy] izy izay manameloka an'i Israely nefa mamaritra ihany koa ireo vondrona mpikatroka palestiniana mialokaloka ao amin'ny hopitaly sy ny sekolin'ny mpampihorohoro.
Nik Ahnag, mpanao sary sady mpitoraka blaogy tena malaza, nandefa sariitatra momba ny fifandanjàn-kery tsy mitovy eo amin'i Israely sy ny Palestiniana [amin'ny teny farsi], fa ihany koa momba ny famoretana ataon'ny fitondràna iraniana. Ny iray amin'ireo sariitatra ireo, etsy ambany, dia maneho maritoa goavana mitondra ny anarana hoe Gaza izay manaporitra ny gazety Kargozaran, ny mpampianatra, ny vehivavy ary koa ireo mpianatra izay toa ho zavatra kendren'ity maritoa ity manaraka.
Manoratra mikasika ilay fanambarana niafara tamin'ny fanakatonana ny gazety reformista Kargozaran ny blaogera Jomhour :
Ny lojikan'ity fanambaràna ity angamba dia ny heverin'ny ankamaroan'ny iraniana tomponandraikitra politika, fa tsy sahiny aseho, izay tsara ho fantatra fa ny krizy ao Gaza dia fialantsiny [ho an'ny fitondràna iraniana] mba hivoahana amin'ny fahasahiranana ara-toekarena sy ara-tsosialy izay mitombo be. Tokony mametraka fanontaniana isika ankehitriny hahafantarana hoe ahoana ny fomba hitsarantsika ny fifanandrinana tamin'ny taona lasa teo amin'ny Hamas sy ny Fatah tao Gaza, izay nahafaty Palestiniana an-jatony. Tena mafy loatra ny herisetra hany ka tany Israely ny mpikatroka sasany avy amin'ny Fatah no nahita fialofana .
Faranan'ity blaogera ity amin'ny fanamafisana fa toy ny fanaovan'ny palestiniana mpitondra sasany kolikoly, mamelona ireo vondrona mpampihorohoro sy ireo mpanohana ny fankahalana ara-pivavahana sy ara-poko ary ny herisetra ny fanafihana lozabe ataon'i Israely.
Ambaran'ny blaogy My Babbling Brain [amin'ny teny farsi] :
Mamela olona am-polony ho tsy an'asa ny fanakatonana ny gazety Kargozaran, ary lasa [amin'ny tsy fisian'ny gazety tsy miankina] sarotsarotra kokoa ny mampita vaovao momba i Gaza amin'ireo olona tsy matoky ny fahitalavitra an'ny fanjakana sy ireo tranonkala ofisialy amin'ny Aterineto.
Mitaraina ihany koa amin'ilay sivana ilay blaogera Hossein Ghazian [amin'ny teny farsi] ary manoratra : ”Raha tsy azontsika atao ny miaro an'i Israely sy ny miresaka manohitra ireo Palestiniana, tsy misy ilàna azy sady tsy azo itokiana ny teniko izay manameloka ny fibodoana sy ny herisetra israelinana…”
Manoratra mikasika ny ”tsy fahombiazan'ny fahitalavitra sy ny sivana iraniana” ny Behesht Street :
Malheureusement le pouvoir iranien ne l'a pas compris, et continue de se faire des illusions en espérant influencer [par sa propagande] les Iraniens. / Tato ho ato, na aiza na aiza ao Iràna iresahan'ny olona mikasika ny politika, miresaka momba ny fifanandrinana misy eo amin'ny Hamas sy Israely izy ireo. Manao izay rehetra vitany ny Fahitalavi-pirenena mba hanisiana sira mikasika io lohahevitra io, saingy tsy mbola tonga saina ihany ny fanjakana iraniana hoe misy vokany ratsy ho an'ny Hamas ny fampielezankeviny amin'ny fahitalavitra. Mifanohitra amin'ny tanjon'ny Fahitalavitra Iraniana, mihoatra ny olona vitsivitsy fotsiny izay, noho ny fampielzankevitry ny Fahitalavitra Iraniana, dia andalam-panohanana an'i Israely sy ny manao fanambaràna ny maha-mpanohitra ny Hamas azy….